5 စကားလုံးမြား vs.5မုသာစကား — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ကျွန်တော်သတင်းစကားတစ်ခုတုံ့ပြန်အဆိုပါလမ်းကနေဖွင့်တဲ့သူအပေါ်မူတည်. ငါ့ကိုသငျသညျဥပမာတစ်ခုပေးပါရစေ. တကျွန်းတနိုင်ငံသားလမ်းပေါ်မှာငါ့ကိုအထိလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကပြောပါတယ် အကယ်., "ငါ့ကိုကိုမှန်ကန်လျင်မြန်စွာသင့်ကားမှသော့ချေးပါစေ. ငါသည်သင်တို့၏လက်အိတ်သေတ္တာထဲကအချို့ပိုက်ဆံရချင်တယ်,"ငါသည်ဖြစ်နိုင်သူအရူးရဲ့ကဲ့သို့သူ့ကိုကွညျ့ရှုနဲ့ off လမ်းလျှောက်မယ်လို့. ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးငါ့ကိုမှတက်လာခြင်းနှင့်တူညီသောအရာဆိုလျှင်, ငါဒုတိယအတွေးမပါဘဲသူမ၏သော့ပေးချင်ပါတယ်. အကျွန်ုပ်တို့သည်နားစကားပြောမယ့်သူကိုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားတုံ့ပွနျကွ.
ဘယ်လိုအကြောင်းတစ်ပိုပြီးမြင်ကွင်း. အကြှနျုပျ၏ကောင်းသောမိတ်ဆွေတယောက်ငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝကျော်ကသူ့စုံလင်သောအခွင့်အာဏာမှတင်သွင်းရမည်ဟုအခိုင်အမာ အကယ်., ငါဖြစ်နိုင်သူအရူးရဲ့ကဲ့သို့သူ့ကိုကွညျ့ရှုနှင့်အချို့သောမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရသွားလိမ့်မယ်. ငါ့ကိုအကြောင်းလမ်းတုံ့ပြန်ရန်အဘို့အထိုသို့ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အလွန်တူညီသောအရာကပြောကြားခဲ့သည်အဘယ်သို့လျှင်?
2 တိမောသေ 3:16 ကပြောပါတယ်, "အားလုံးကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်။ " တပြင်လုံးကိုကျမ်းပိုဒ်မရဲ့, ဒါပေမဲ့အဲဒီငါးခုစကားတစ်သက်တာအဘို့တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပွောဆို. သမ္မာကျမ်း၏စကားသညျဘုရားသခငျ၏စကားကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုသိသာသည်. ထိုအခါငါသူတို့အားငါးခုစကားသည်ထင်, "အားလုံးကျမ်းစာ၌ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်,"ကျွန်တော်တို့တခါတရံကျမ်းစာအကြောင်းယုံကြည်သောမုသာစကားအချို့ကိုစစ်တိုက်ကူညီ. ငါငါးမှာကြည့်ရှုချင်.
1. ကျမ်းစာ၌မင်-ဘုရားသခင့အသက်ရှူကြောင့်: သဘော
ကျွန်တော်တို့ကိုအတော်များများအကြံပြုချက်များနှင့်ပြည့်ဝ၏စာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်ပညာရှိစကားများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုတူကမျြးစာကိုပြုမူဆက်ဆံ. ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစုဝေးစေကြောင်းကိုးကား့စာအုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကမျြးစာကိုဤနည်းဆက်ဆံဖို့ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ကတဆင့်လှန်ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်. သို့သော်ထိုသို့မဖွင့်.
ဘုရားသခငျသညျသကျရှငျသောဝိညာဉ်အပေါ်မှာအခွင့်အာဏာရှိပြီးသူကပညတ်တော်မူသောအခါ, သူတို့မျှသာအကြံပြုချက်များမဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ကကျွန်တော်စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်စေမရှေးခယျြနိုငျထင်မြင်ချက်မဟုတ်ပါဘူး. ဘုရားသခင်က "ထင်မြင်ယူဆ။ " မရှိပါဘူးသူသညျဘုရားသခငျဖွင်. သူဟာအမှန်တရားထင်သမျှ.
2. ကျမ်းစာ၌မင်-ဘုရားသခင့အသက်ရှူကြောင့်: ခေတ်မလိုက်သော
ကျွန်တော်တို့အတိတ်ရဖို့လိုအပျကွောငျးဟောင်းအမြင်များနှင့်အတူအဟောင်းစာအုပ်အဖြစ်ကျမ်းစာအကြောင်းအတော်များများဟာယနေ့လူဆွေးနွေးချက်. သူတို့ကို, ဒါကြောင့်မကြာခဏထိုးစစ်နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်ကူးပြောင်းခြင်းကိုလုံးဝအကျင့်ပျက်င်. အခြားသူများကပြောပါ, "ဒါဟာဟောင်းရဲ့ - ကနေဘာသင်သည်တတ်နိုင်ရ, ဒါပေမယ့်လည်းအလေးအနက်ယူကြဘူး။ "
ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားသက်တမ်းကုန်ဆုံးမပါဘူး. ဘုရားသခငျသညျအခြို့သောယဉ်ကျေးမှု setting ကိုကလွှမ်းမိုးသူတစ်ဦးသည်လူမဟုတ်. ဘုရားသခငျသညျထာဝရအသမှထာဝရအသကနေ. ကမျြးစာကဟောင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့သမ္မာတရားကိုအားလုံးယနေ့နည်းတူမှန်. ဒါကြောင့်ငါတို့အလုပ် "ကျွန်တော်တို့ကို fit" မပါဘူးသို့မဟုတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျင့်တရားသည်ထင်သောအရာကိုမကိုက်ညီသောပစ္စည်းပစ္စယလျစ်လျူရှုရန်မဖြစ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ဘုရားသခင်ကအဘယျအဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတို့အဘို့အဓိပ်ပာယျကိုထှကျတွက်ဆ, ထိုသို့တင်ပြ.
3. ကျမ်းစာ၌မင်-ဘုရားသခင့အသက်ရှူကြောင့်: ရုံသတင်းအချက်အလက်
မှားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဘာသာရေးနှင့်တူကျွန်တော်တို့ကိုတချို့က. ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပစ္စယသင်ယူနှင့်နက်ရ​​ှိုင်းသောခံစားမိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာ၌ကိုသွား. သငျသညျကမျြးစာကိုဖတ်ရတဲ့အခါသူကကိုယ့်သမိုင်းစာအုပ်မဟုတ်ပါဘူး, သို့မဟုတ်ပညာ၏ဖွင့်မယ့်စာအုပ်, သို့မဟုတ်ပုံပြင်များ့စာအုပ်. ဒါဟာသူတို့အမှုအရာသည်, ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမယ့်သူတို့အမှုအရာ. သငျသညျစကားတျောနှင့်အတူဆင်းထိုင်ရသောအခါ, သငျသညျဘုရားသခငျနှငျ့အတူတွေ့ဆုံနေကြသည်. သင့်ရဲ့စိတ်ကို၏ရှေ့တန်းမှမှာအဖြစ်မှန်မပါဘဲဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုဘယ်တော့မှမ. ဘုရားသခင့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်. နားထောင်.
4. ကျမ်းစာ၌မင်-ဘုရားသခင့အသက်ရှူကြောင့်: ထွင်းဖေါက်ခြင်း
ငါသည်ဤဖြစ်နိုင်ကြှနျုပျတို့အားလုံးတစ်ချိန်ချိန်၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ဘူးသောအပွစျရှိရှုထောင့်သည်ထင်. တကယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းပြီးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကမျြးစာကိုဖတ်ချင်ကြပါဘူး. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မထားဘူး. ကိုယ့်တဦးတည်းအရာလို့ပြောပါလိမ့်မယ်: ဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရဖို့ boring နိုင်!? ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွစျရှိအရသာဘူးသီး၏သက်သေအထောက်အထားများင်. ဒါဟာကျနော်တို့အားလုံးမှားအရာများအတွက်အရသာရှိကွောငျးဖျောပွသ.
ကနောင်တကြပါစို့, ခရစ်တော်ယုံကြည်စိတ်ချ, ဘုရားသခငျသညျနှငျ့တှေ့ဆုံဖို့အခွင့်ထူး၏အားသာချက်ယူ.
5. ကျမ်းစာ၌မင်-ဘုရားသခင့အသက်ရှူကြောင့်: အားနည်းသော
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်. ဒါဟာသူတစ်ခုလုံးကိုဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အတူရှိ၏. ဟုသူကပြောသည်, “အဲဒီမှာဖွစျပါစေ,” ထိုအရပ်၌ခဲ့သည်. ယရှေု, ဘုရားသခငျသညျသားတျောသညျ, သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၏တနျခိုးအပြည့်အဝပြသခဲ့တဲ့ကမ္ဘာမြေဆီသို့ရောက် လာ. ,. သူက cowered နတ်ဆိုးများပြောသောအခါ, လေနှင့်လှိုင်းတံပိုးပြန်လည်ဆုတ်ခွာ, ထှကျပွေးရောဂါများ, သေလူအသက်ပြန်ရှင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,. ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်ကူးအစွမ်းထက်သည်.
ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုငျသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒါဟာင်. ဘုရားသခငျသညျယရှေုကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါအအေးသေဆုံးစိတ်နှလုံးထဲသို့ချိုးဖျက်ဖို့သူ့ရဲ့အစွမ်းထက် Word ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သူတို့ကိုမျက်စိပေး, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်စေသူ. ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားကိုယ်တော်တိုင်ထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆက်လက်သောဤတူညီသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်.
သင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်အညစ်အကြေးထိုင်သောစာအုပ်တန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်. သန့်ရှင်းသောအရပ်ဖြစ်ပါသည်, သန့်ရှင်းသော, စစ်မှန်တဲ့, နှင့်စိတ်ကူးအစွမ်းထက်.
KdMeads • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို! ငါကပိုလိုအပ်ပါတယ်!
Latisha • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Clarence • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီ post ကအရမ်းထိထိမိမိခဲ့သည်. ငါ့ကိုကိုးကွယ်ရာစကားလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်စေပုံကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာလျှောက်ထားရန်. သူကသင့်အသက်တာခရီးစဉ်အပေါ်ထားရှိသည့်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေသိမ်းဆည်းထားပါ!!!
Tee • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားရေ! ဒုတိယအချက်သခင်ဘုရားသည်ဤနေ့လည်ခင်းအကြောင်းကိုငါ့အားမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။. ပိုပြီးဗျာဒိတ်တော်အဘို့ဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးပါ! ဤသည်သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကိုဘုန်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုကြီးစွာသော Post ဖြစ်ပါတယ်။.
Rosalinda • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသူသည်ငါတနေ့လုံးဖတ်ပြီးပါပြီအရှိဆုံးလန်းဆန်းအရာဖြစ်ပါသည်. ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးအလင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခငျသညျဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဘို့ Thnx!!
Shauneil • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 12:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂျရုမ်း • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 1:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
BoomSauce! ငါကအများကြီး bro ကြိုက်တယ်! အလွန်သင့်လျော်သောအလွန်ရှင်းလင်းစွာကြေညာ… အဆိုပါ “သမ္မာကျမ်းအားလုံး”
တိုနီ kachule • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 2:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ:5စကားလုံးမြား vs5မုသာစကား …ခရီးစဉ် Lee က | bro. Jerome
Athenkosi Nogcinisa • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 2:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ချစ်ခင်ရပါသောခရီးစဉ် Lee က
ပဲအစောပိုင်းတုန်းကကျွန်မအပေါ်ကျွန်မရဲ့ကျမ်းကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီစကားကယ့်ကိုငါ့ထံသို့ပြောသော, “ရှေးင်” နှင့် “ငါတကယ်ဖတ်ရန်ရှိသည် Do?”.ဤ blog ကယ့်ကိုကျွန်မရဲ့ bible.God သင်ကကောင်းကြီးပေးကြည့်ရှုကျေးဇူးတင်ပါသည်လမ်းကိုပြောင်းလဲသွား
kebron • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 2:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြောက်မက်ဘွယ်သော! ဒီကယ့်ကိုငါ့ကိုကောင်းကြီး. ဦးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို doin အတှကျကြေးဇူးတငျ :)
CodyMcCracken • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 4:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ယောလ • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 5:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦးအဖြစ် 19 နှစ်ဟောင်းကောင်လေး, ဦးငါ၏အမျိုးဆက်နှင့်အတူဆက်စပ်တူသောငါခံစားမိ.
ကိုယ့်ပြောချင်ခဲ့တယ်, ငါ ur လုပ်နေတာအဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးထားတယ်။. ငါ blinking မပါဘဲ 1hr အဘို့တရားကိုဟောပြောနားထောင်နိုင်သည်ကြောင်းတည်းသောကောင်လေး ur! ငါသည်ဤ site ကို plz အပေါ် ur တရားတက်ပိုစကားကိုနားထောငျကဘာလဲဆိုတာ!
ဒက်ဘီ • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 9:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂျက်စီကာ • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 9:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်! ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ငါလုံးဝဤ blog LOVE! အားပေးမှု၏ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်စကားများအဘို့အသင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်! :-)
CherishJesusLuv • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အကြှနျုပျ၏ကမျြးစာကငါယေဇကျေလအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုစင်ပေါ်တွင်မဖြစ် 24. ငါဖြောင့်ပစ်ချဖတ်နေပါတယ်. သို့သော်လည်းငါသည်ဤကဲ့သို့သောဘာမှကိုဖတ်ဖူးဘူး….သူကဂျေရုဆလင်ကိုဖော်ပြထားတယ်လမ်းကိုအရူးဖြစ်ပါသည်. ငါနီးပါးသူသည်ဤတရားဆုံးဖွတျဖျောပွထားသကဲ့သို့ပင်ဘုရားသခငျ၏တနာကျင်မှုဒီအခန်းမှာပစ်ချခံစားရနိုင်ပါတယ်.
limon • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 11:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
wow ငါအချို့အလွန် treanhnct မှတ်စေသငျသညျဝနျခံရမယ်.
ReneeB • စက်တင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 9:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အမှန်?! ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်!!! အစဉ်အဆက်သင်အလုံအလောက်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်သင့်ဘဝကိုအတူအလုံအလောက်ဟုမဟုတ်ပါဘူးထင်မထားပါနဲ့။. ကိုယ့်သူထံမှသင်တို့ယူဆောင်သောအရာကိုသတိရနှင့်သင်လျင်မြန်စွာသူပြုတော်မူပြီအဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။. သူကဒါခိုးသင်အသုံးပြုနေသည်!!! သင်ပြုသမျှကိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်!!!!!!
Omario. • စက်တင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 1:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တိုင်း Word ကိုစို့, ရဲရင့်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်နှင့်အတူအပေါ်သို့အသုံးပြုတှေးတောဆငျခွခံရ,
ollilovely • စက်တင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 2:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပညာတရားကိုဟောပြောသောဤစကားကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သူ့ကတိတော်များကိုဖွင့်ခံစားရ-ကောင်းသောစကားများသို့မဟုတ်ဖှယျနှင့်အားတက်စရာကိုးကားမဟုတ်ငါ့ကိုသတိပေး… သူတို့ဤမျှလောက်ပို…သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကျော်ညျဘုရားသခငျ၏အမှန်တရားတွေပါပဲ. #ကိုယ်ကြိုက်တယ်!
သူ့အဆုံးမဲ့ဉာဏျပညာနဲ့မေတ္တာသည်သခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့သူ့အဘို့သန့်ရှင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားလုပ်. နှင့်သူ၏ဝိညာဉ်တော်အားရန်သင့် sensitivity ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါသည်ငါ့အနုပညာကလူတစျနေ့ကဥစ္စာမလမ်းကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်! တရားကိုဟောသိမ်းဆည်းထားပါ, bro!
ဖေါ်ပြ: နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ- နေ့ 9: ဂတိတော်ရီးရဲလ်များမှာ! | ollilovely
ဝိန်း Miller • စက်တင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 6:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Terran • စက်တင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 11:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ငါမီးကိုဆင်းကွယ်လွန်ကျွန်တော်နှင့်အတူအားလုံးသဘောတူညီမှု, အထူးသဖြင့်လာသောအခါထင်ရာတစ်ခုခုသည်. ငါကအခြားစာရေးဆရာများကရေးသားစာအုပ်တွေကျမ်း၎င်းတို့၏အမြင်များပေးခြင်းမြင်သောအချို့ကိုတွေ့မြင်သော်လည်းသမ္မာကျမ်းစာမှုတ်ကြောင်းမေ့လျော့. အမြဲတမ်းမြင့်မားတဲ့အခွင့်အာဏာအဖြစ်ကမျြးစာကိုယူ!
ဖေါ်ပြ: စနေနေ့ကြွေးကြော်ကြလော့-တနေရာ: Kansas City, ထင်းရှူးဖြီး, & ဝန်ကြီးဌာနအ Links များ | H.B. ချားလ်စ် Jr.
JosephBonacci • စက်တင်ဘာလ 7, 2013 တွင် 12:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လှသောအဆင်း. ဘုရားသခ’ စကားလုံးပြောင်းလဲဘယ်တော့မှ. ဒါဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်သကဲ့သို့ယနေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှင့်နေဆဲယခု မှစ. နှစ်ပေါင်းစစ်မှန်တဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်လိမ့်မည်. က Man ပြောင်းလဲပစ်ရန်ချစ်သောသူ, ပွောငျးလဲခွငျး, အလှဲစကားပွနျ, နှင့်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲ. ဒါကြောင့် Read, အဲဒါကိုလေ့လာ, ဒါဟာအသက်ရှင်နေထိုင်. နှုတ်ကပတ်တရား၏အကျင့် Be. Identityfulfilled.com
Altruism • စက်တင်ဘာလ 9, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သမ္မာကျမ်းစာကဘာကြောင့်မကုရ်အာန် / Bhagavad Gita / Talmud / etc ။?
Shelby • စက်တင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 1:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီလိုအပ်ဘယ်လောက်ရှင်းပြလို့မရဘူး, နှင့်မည်သို့ကျေးဇူးတင်ငါသည်သင်တို့ကိုဤသတင်းစကားအဖြစ်ညျဘုရားသခငျ၏စကားသံကိုနားထောငျပေးကြောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိခဲ့သည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒါဝိဒ်သည်ဝီလျံ • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 1:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Walker က • စက်တင်ဘာလ 11, 2013 တွင် 10:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
“အပွစျရှိ tastebuds,” ငါ့အဲ့တာကိုသဘောကျတယ်. ဒါစစ်မှန်တဲ့င်. ငါနှုတ်ကပတ်တော်လာအိပ်ပျော်. အဲဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောင်. ကျွန်မနောင်တရနှင့်ငါ့မျက်စိဖွင့်လှစ်သညျဘုရားသခငျကိုမေးငါ့ကိုကျေနပ်ဖို့လိုအပ်, ဆာလံဆရာနဲ့တူ. စာအရေးအသားကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ခရီးစဉ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်, ဒါဟာကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယင်. အလွန်အားတက်စရာနှင့်မြေကြီးကိုဆင်း.
ချယ်လ်ဆီး • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 8:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. သူတို့အမှတ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတဦးတည်းပိုင်ခွင့်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုသမ္မာကျမ်းစာအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်ပေးခဲ့တယ်. ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကိုဟောပြောမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒါဟာလူအမြား၏ဘဝတွေကို toughing ရဲ့.
ဗစ်တိုးရီးယား • အောက်တိုဘာလ 26, 2013 တွင် 7:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ:5စိတ်ကူးများ (မမှန်သော) ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် | ကျွန်မကျမ်းစာလေ့လာ